Zimbabwe: Chinese firm to build hotels - Concrete Trends
Chinese multinational group, Touch Road International Holdings, has revealed plans to construct two hotels in Harare and Victoria Falls. The group has partnered with the Zimbabwe Tourism Authority to grow Chinese tourist arrivals in the country as the tourism regulator is making strides to double arrivals this year.
“We are in negotiations with the Government and we are discussing how to implement the project, the Ministry of Tourism and Hospitality Industry has already allowed us to scout for land, we are also in talks with Forestry Commission,” Dr Liehui.
According to the figures released by the Zimbabwe Tourism Authority in 2018 the country recorded about 2,7 million tourist arrivals surpassing the peak recorded in 1999. The 2018 arrivals were boosted by the bulk from the Chinese market.
Tourism Business Council of Zimbabwe president Winnie Muchanyuka, hailed the development saying it was a solid initiative and a timely boost for the industry which is on the recovery path. “It is our hope that players across the tourism industry will benefit from the numbers that will be coming through because of this initiative,” said Ms Muchanyuka
« Unops to raise $647m for 100 000 houses in Kenya » Italy to finance Ethiopia, Eritrea railway line project